Wasiiradda gar gaarka Iswiidhan oo Soomaaliya booqasho ku tagtay - iftineducation.com
iftineducation.com – Haweeneyda dalkaan Iswiidhan uga ah gar gaarka dibadda Isabella Lövin, ayaa shalay booqasho ku tagtay magaalo madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho.
Wasiiradda oo ka warameeeysay ujeedada socdaalkeeda ay ku tagtay Soomaaliya ayeyy sheegtay ineey dooneeysay sidii ay ula socon laheyd gar gaarka ay dowladeeda siiso Soomaaliya iyo ineey najiito dhaliyeen isbadalada siyaasadeed ee dalka ka jira.
” Ujeedeeyda booqashadeeydu waa inaan eeggo halka ay marayaan howla gar gaarka iyo isbaladda siyaasadeed ineey ku talowsadeen horumar” ayey tiri Isabella Lövin, oo dhinaca kalena ka faalooneeysay raadka ay reebeen dagaaladda sokeeye ee saameynta weyn ku reebay magaaladda caasimadda ah.
“Marka aad ku dhex socoto magaaladda Muqdisho waxaad arkeeysa dhaawaca xoogan ee soo gaaray dhismayaalkii hore iyo raadadkii dhismiyaalka Talyaanigu dhisay ku dhacay, waana arrin laga xumaado” ayey tiri wasiiradda oo hadana hadalkeeda sii daba dhigtay in Soomaaliya tahay dal mudan in markale dib u dhis lugu sameeyo.
Soomaaliya ayaa weli waxaa uu yahay dal ay kala qeyb sanaan siyaasadeed ka jirto iyadoo xilligana uu yahay xilli kala guur ah oo dalku galayo doorasho ay caqabado badan ku heereysan yihiin, ayaa hadana waxaa sida cadceeda oo kale u muuqda dowrka ay hogaamiye dhaqameedyada soo xulanaya xildhibaanada baarlamaanka la filayo inuu yeesho.
Wasiiradda ayaa joogitaankeeda saacadaha ahaa aad u ammaantay Soomaaliya, waxaana ay tilmaantay da daalka ay soomaalidu ku dooneeyso in la soo celiyo kala dambeyntii iyo dowladnimadii luntay. Socdaalka wasiiradda ayaa sidoo kale imanaya maalin ka dib markii maanta uu qarax ay dad badan ku dhinteen ka dhacay agagaarka dekada magaaladda Muqdisho.